I-Weihong Carbon Fibre - Ityhubhu yeCarbon Fibre, Ibhodi, Ukubonelela ngomveliso weCarbon Fiber Ski
Ibhodi yeCarbon Fibre
Izibonda zeCarbon Fibre Ski
Iibhokhwe zeCarbon Fibre zokuntywila
Intonga yeHockey yeHockey
Iimveliso zethu ngokubanzi zibandakanya ityhubhu yeCarbon fiber, icarbon fiber ski pole, carbon fiber hookah ityhubhu, ityhubhu yombala wekhabhoni, ikhabhoni yefayibha yesikhephe, ibhodi yefayibha yekhabhoni kunye neemveliso zentsimbi ezi-5-axis ngaxeshanye i-CNC machining, 4-axis ngaxeshanye CNC machining, njl.
Icandelo leCarbon Fibre
Ityhubhu yeCarbon Fibre yesiqhelo
Isithuthuthu Ibhetri Tube
IBhodi yeCarbon Fibre yesiqhelo
I-Shenzhen Weihong Carbon Fibre yeeMveliso zeTekhnoloji yeCr., Ltd. umenzi weemveliso zecarbon fiber kunye nolawulo olulawulwa ngokwamanani. Ibe 7 iminyaka yimbali yophuhliso. Inkampani inamandla omeleleyo obuchwephesha kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho. Iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu kwezemidlalo kunye neemveliso zolonwabo, ezonyango, elektroniki, indawo yomoya, amalungu auto kunye namanye amashishini.
Ukusetyenziswa kweBhodi yeCarbon Fibre kwifenitshala
Sonke siyazi ukuba ibhodi yefayibha yekhabhoni isetyenziselwa ukomeleza kunye nokomeleza ibhodi. Inkqubo yokuvelisa i-carbon fiber kunye ne-resin kwaye iqinise kwi-mold kunye ne-pultrude. Inokumelana nokubola, amandla aphezulu, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana ukothuka olomeleleyo, ubunzima obulungileyo, kunye nobomi obude ect. Kodwa ngubani owaziyo ukuba ukongeza kokomeleza izakhiwo, iibhodi zecarbon fiber zinokusetyenziselwa ukwenza ifanitshala. Eli nqaku liza kukunika intshayelelo emfutshane. Uhlobo lwefanitshala olwenziwe nge-carbon fiber luyafumaneka kwintengiso, kodwa kunqabile kakhulu. Kuba ixabiso libiza kakhulu, phantse akukho mntu uyithengayo, ke ihlala ifuna ukulungiswa. Nangona kunjalo, ifenitshala eyenziwe ngokudibanisa ikhabhoni…
Ukusetyenziswa kweCarbon Fibre Kwintsimi yeZinto zokubhala
Kule minyaka yangoku, Icandelo lekhabhoni yefayibha likhule ngokukhawuleza kwaye lingene kwiindawo ezahlukeneyo, phantse kuyo yonke indawo. Nokuba iyiwotshi ephucukileyo, ikhadi elilula lomsebenzi, imoto ephezulu, okanye ityesi epheleleyo, inokwenziwa ngefayibha yekhabhoni. Uninzi lwabantu alukhange lucinge ukuba i-carbon fiber inokuba nophuhliso lwanamhlanje. Nangona kunjalo, ukuba imveliso entsha ayenziwanga okanye ayisetyenziswanga, akunakwenzeka ukwazi ukuba kufanelekile. Isicatshulwa sixelela wonke umntu malunga nokusetyenziswa kwentsimbi yekhabhoni kwizinto zokubhala. Izinto zokubhala ezinokwenziwa nge-carbon fiber zibandakanya ii-stapler, iipenisi, abalawuli, iipeni, njl. Ifayibha yeCarbon inamandla aphezulu, ubunzima obulungileyo, nokumelana, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuxhathisa ukungqubana, kunye nokucoca ngokulula. Izinto zokubhala zi…
Jonga ezinye iindaba kwaye ufunde ngathi
Idilesi:6Umgangatho, Ukwakha 203, Ipaki yeTekhnoloji yeTairan, Indlela yesine yaseTairan, Uluntu lwaseTianan, Isitalato iShatou, KwiSithili saseFutian, Shenzhen, Guangdong.
Inombolo kanomyayi:+86 18922506130
I-Weihong Carbon Fibre ©Ilungelo lokushicilela ©2022 Onke amalungelo agciniwe.